Dental Care – Page7– Healthy Life Journal
ပါမောက္ခဦးကိုကိုမောင် မေးရိုးနှင့်ခံတွင်း ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီးနှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း မေး. မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ ပင်ကိုသွားအရောင်က ဘယ်လိုအရောင်မျိုးရှိတတ်ပါသလဲဆရာ။ ဖြေ. သွားဆိုတာဖြူဖွေးနေရမယ်ဆိုပြီး လူတိုင်းကခံယူထားကြပါတယ်။ ကပ္ပလီတွေ၊ အိန္ဒိယလူမျိုးတွေကျတော့ သူတို့အသားအရေက နက်မှောင်နေတယ်၊ အဲဒီတော့ သူတို့သွားတွေက သိပ်ဖြူတယ်၊ သူတို့အသား အရေနဲ့ဆိုတော့ သူတို့ရယ်လိုက်ရင် သွားတွေက ပိုပြီးဖြူဖွေးနေတာမျိုးတွေ့ရတတ်ပါတယ်။...
ပါမောက္ခဦးကိုကိုမောင် မေးရိုးနှင့်ခံတွင်း ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း မေး ။ သွားဖုံးကနေ သွေးခဏခဏ ထွက်နေတာ ဘာကြောင့်ပါလဲ ဆရာ။ ဖြေ ။ သွားဖုံးက သွေးထွက်တယ်ဆိုရင်တော့ ညအိပ်တဲ့အခါ ခေါင်းအုံးမှာ သွေးတွေစွန်းပြီး ရှိနေသလား၊ ဒါမှမဟုတ် သွားတိုက်တဲ့အခါ သွေးတွေထွက်လာသလား၊...
သွားကျန်းမာစေမည့် အစာ . . .
– နွားနို့ နွားနို့မှာ ကယ်လ်ဆီယမ်ဓာတ် ပါဝင်တာကြောင့် သင့်ခံတွင်းကို သွားဖုံးရောဂါမရအောင် ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ – ဆယ်လ်မွန်ငါး ဆယ်လ်မွန်ငါးမှာ ဗီတာမင်ဒီပါဝင်တဲ့အတွက် သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကနေ ကယ်လ်ဆီယမ်စုပ်ယူပြီး အသုံးပြုနိုင်စွမ်း ကောင်းစေပါတယ်။ – လိမ္မော်သီး လိမ္မော်သီးဟာ သွေးကြောတွေကို သန်စွမ်းကျန်းမာစေပြီး သွားတွေထဲက...
ပါမောက္ခဦးကိုကိုမောင် မေးရိုးနှင့် ခံတွင်းခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း မေး ။ သွားကြိတ်ရတဲ့ အကြောင်းတွေကို သိပါရစေ ဆရာ။ ဖြေ ။ သွားကြိတ်ရတဲ့ တိကျတဲ့ အကြောင်းရင်းရယ်လို့တော့ ပြောလို့မရပါဘူး။ တစ်ခါတုန်းကတော့ ဗိုက်ထဲမှာ သန်ကောင်တွေရှိရင် သွားကြိတ်တတ်တယ် ဆိုတဲ့ အယူအဆ...
သင့်ကလေး သွားတိုက်ရာတွင် . . .
ပါမောက္ခဦးကိုကိုမောင် (မေးရိုးနှင့် ခံတွင်း ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီး) လူကြီးတွေကျတော့ ခံတွင်း သန့်ရှင်းဖို့ အတွက် ပူရှိန်း (Mint)တွေပါတဲ့ အမျိုးအစားတွေကို သုံးတာကောင်းပါတယ်။ သွားပေါက်ခါစ ကလေးငယ်များ အသက် ခြောက်လလောက်ဆိုရင် ကလေးတွေက သွားတွေ စပေါက်လာပါပြီ။ အဲဒီအရွယ်ဆိုရင် သွားစတိုက်ပေးရပါမယ်။ ဒီအရွယ်လေးတွေက...
သွားကျဉ်ခြင်းအတွက် သီးသန့်သွားတိုက်ဆေးကို ဘယ်လောက်ကြာကြာ တိုက်သင့်သလဲ . . .
မေး – ကျွန်တော်က အသက် ၆၀ ကျော် သက်ကြီး အရွယ်ဖြစ်ပြီး ပါးစပ်ထဲက သွားတွေလည်း မကြာခဏ ဆိုသလို ကျဉ်တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သွားတိုက်ဆေးတစ်မျိုး တိုက်နေပါတယ်။ အဲဒါ့ကို ရေရှည် တိုက်လို့ရပါသလား ဆရာ။ ….. ဦးသန့်ဇင်၊...
သွားနှင့်ခံတွင်းကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်ခြင်းဖြင့် အသက်ရှည်စေနိုင်
ပါမောက္ခဦးကိုကိုမောင် (မေးရိုးနှင့် ခံတွင်း ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီး) အခုခေတ်မှာ ခံတွင်းကျန်းမာရေးက အလွန်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာ လက်ခံလာကြပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ အရင်တုန်းက ခံတွင်းကျန်းမာရေးက သပ်သပ်၊ ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာရေးက သပ်သပ်လို့ ထင်ခဲ့ကြတယ်။ တကယ်တော့ ခံတွင်းကျန်းမာရေးကောင်းနေမှ ကျန်တဲ့ရောဂါဝေဒနာတွေ ကင်းစင်နေမှာပါ။ ကျန်တဲ့ရောဂါတွေကလည်း ခံတွင်းကျန်းမာရေးမကောင်းရင် ပိုပြီးဖြစ်ပါတယ်။...
သွားဆုံးရှုံးခြင်းက သူငယ်ပြန်မှတ်ဉာဏ်လျော့နည်းရောဂါဖြစ်နှုန်း မြင့်တက်စေနိုင်
၊ ကိုထက် ၊ လူအများစုဟာ သွားတွေဆုံးရှုံးတာကို သိပ်ပြီးစိုးရိမ်လေ့မရှိပါဘူး။ တကယ်တော့ ခံတွင်းကျန်းမာရေး ထိန်းသိမ်းသူတွေဟာ တခြားသူတွေထက် အသက်ပိုရှည်နိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ လေ့လာမှုတွေအရ သွားပိုးစားခြင်းအပါအဝင် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် သွားတွေဆုံးရှုံးရတာဟာ အသက်အရွယ် ကြီးလာချိန်မှာ မှတ်ဉာဏ်လျော့နည်းခြင်းနဲ့ သူငယ်ပြန်ရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေ မြင့်မားနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ နိုင်ငံတကာနှင့်...
ပါမောက္ခဦးကိုကိုမောင် မေးရိုးနှင့်ခံတွင်း ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း မေး. သွားဖုံးကင်ဆာဖြစ်ရင် အသက်အန္တရာယ် ထိခိုက်တတ်ပါသလား ဆရာ။ ဖြေ. ကင်ဆာရောဂါလို့ပြောလိုက်ရင် လူတိုင်း၊ လူတိုင်း ကြောက်ကြတယ်။ ဘာကြောင့် ကြောက်သလဲဆိုရင် ကင်ဆာဆိုတာ ကုရင်လည်းမနိုင်ဘဲ ဖြစ်တတ်တယ်၊ မနိုင်ဘဲ တခြားနေရာတွေ ပြန့်သွားတတ်တယ်၊...
၊ မီမိုး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊ အရောင်ရင့်တဲ့အစားအသောက်တွေက သွားတွေကိုအရောင်ရင့်စေနိုင်ပြီး သွားတွေကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ – ဝိုင်နီ ဝိုင်နီထဲမှာပါတဲ့ တန်နင်ဓာတ်ကြောင့် သွားတွေကိုဝါပြီး အညိုရောင် စွန်းထင်းတတ်ပါတယ်။ – ကော်ဖီ ကော်ဖီက အရောင့်ရင့်တဲ့အတွက် ကော်ဖီသောက်ပြီးချိန်မှာ သွားတွေဝါတတ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။...